Turkiga oo la tacaalaya Dab isku mar ka dhacay Keymaha magaalooyin badan iyo Erdogan digniin soo saaray - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaki weyn ka muujiyey Dab isku mar ka kacay Keymaha magaalooyin badan oo ku yaalla dalka Turkiga.
Madaxweynaha Turkiga ayaa ku dhawaaqay in la xakamayeeyayinta badan dabka kaymaha ee maalmihii ugu dambeeyay ka bilowdaymeelo kala duwan oo ka mida dalkaasi, isagoo carrabka ku adkeeyay in la bilaabayo baaritaan xooggan oo lagu ogaanayo sababaha ay isku mar u qarxeeni.
Erdogan ayaa sheegay in dowladiis ay la dagaallamayso dab ka socda 1,140 meelood, kadib markii dabku soo ifbaxay 28kii Luulyo isla markiibana ka bilowday 71 Goobood.
Wuxuu sheegay inay gurmadka iyo la tacaalidda dabka ka qeyb qaadanayaan 45 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah. “Waxaan xaaladda aagagga Dabka Turkiga ka kacay kula soconnaa diyaaradaheenna drones-ka” ayuu yiri.
Madaxweyne Erdogan ayaa intaas ku daray in ilaa ​​1080 baabuur oo Dab-damis ah ay ka hawlgalaan aagagga ay Dabku saameeyay, ayna taageeraaan Booyado gaaraya 280 iyo Sidoo kale 2,270 oo kuwa gurmadka degdega ah.
Shaqaalaha Dab-damiska ee howsha ku jira ayaa gaaraya 10,550 qof, waxaana inta badan gacanta lagu hayaa Dabka meelaha badan ka qarxay oo kadib Jimcihii shalay si xoog leh looga howlgalay.
Madaxweyne Erdogan wuxuuu sheegay inay jiraan baaritaanno xoog leh oo ku aaddan Dababka keymaha ee isku mar ka bilowday meelo kala duwan oo Turkiga ah si loo ogado haddii si ulakac ah loo abuuray iyo in kale, waxaana baaritaanka ku jira Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo sirdoonka Turkiga.
Madaxweynaha Turkiga ayaa tilmaamay in “Arrintu aysan ahayn wax iska yimid, dabku wuxuu ku dhowaad isku mar ka billowday in ka badan gobollada oo ku yaalla koonfurta Turkiga,” isagoo raaciyay, “Waa inaan si wadajir ah u istaagnaa maalintan, aan qaadannaa go’aan mideysan oo aan qaadnaa tallaabooyin mideysan. hal jiho oo wada jira. ”
Dhiniciisa, Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka Turkiga, Murat Kurum, ayaa ku dhawaaqay in mas’uuliyiintu ay fureen baaritaanno dhammaystiran oo ku saabsan sababaha dabka kaymaha.
Mas’uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in inta badan Dabkii kaynta ee ku faafay Gobollada ku yaalla xeebaha dalka Turkiga ee Badda Mediterranean-ka la xakameeyay, waxaana ku dhintay 4 qof, iyadoo dad fara badan laga daadgureeyeen tobanaan tuulooyin oo ay deganaayeen.
Rajeb Tayyib Erdogan
Previous articleBeesha Caalamka oo Dalab Culus oo ku saabsan Doorashada u dirtay Maamul Goboleedyada (Akhriso)
Next articleXOG: Doorashada Aqalka Sare oo ka bilaaban doonta K/Galbeed iyo faragelinta Farmaajo & Lafta-gareen